Ma Leedahay Fiidiyow Bogga Guri ah? Ma tahay inaad
Isniin, November 9, 2015 Jimco, Nofeembar 13, 2015 Jeremy Williams
Waxaan dhowaan la kulmay Warbixinta Gobolka ee Video 2015 ee ka socota Crayon, degel ku xusan waxay leedahay uruurinta ugu ballaadhan ee naqshadaha suuqgeynta ee shabakadda. Warbixinta cilmi-baarista ee 50-ka bog ah waxay diiradda saartay ugu horreyntii burburka faahfaahsan ee shirkaduhu adeegsadaan fiidiyowga, haddii ay adeegsadeen barnaamijyo martigelin oo bilaash ah sida Youtube ama barnaamijyo lacag lagu bixiyo sida Wistia ama Vimeo, iyo kuwa warshadaha u badan tahay inay adeegsadaan fiidiyowga. Iyadoo taasi xiiso laheyd, qeybta ugu xiisaha badan
URL Cusub: Nadiifi URL-yadaada Wadaagista
Isniin, February 17, 2014 Jimco, Oktoobar 24, 2014 Douglas Karr
Dadka wanaagsan ee ku sugan Wistia waxay soo saareen qoraal isweydaarsi ah oo loo yaqaan 'Fresh URL' oo aad ku dhex gashan karto bartaada oo ka saareysa dhammaan raadinta ololaha dheeraadka ah iyo koodhka kale ee aan loo baahnayn ee cinwaankaaga. Tani waa aalad aad u fiican maxaa yeelay waxay ka dhigan tahay in koodhadhkaaga ololaha dib loo isticmaali doonin maadaama dadku wadaagaan xiriiriyeyaasha bartaada. Tusaale ahaan, haddii aad olole emayl ku jirto oo ololahaagu ku jiro… iyo mid ka mid ah